Ikhaya-N-Ingadi | Septhemba 2021
Izindlela ezi-10 ezihamba phambili zokuqeda izibankwa namaphela
Izintwala namaphela yizinto ezimbi kakhulu nezicasulayo ekhaya. Ngakho-ke, funda ukwazi amakhambi asekhaya amahle kakhulu wokuqeda izibankwa namaphela.
Amathiphu we-Vastu Wempilo Eshadile Ejabulisayo (amathiphu Obudlelwano Bomyeni Nomfazi)
Ufuna ukuba nokuphila okujabulisayo emshadweni ngemuva komshado, bese ulandela lezi zeluleko ezilula zempilo enhle yomshado.
I-Eco-Friendly Diwali: Imibono Yokuhlobisa Yokuphakamisa Umhlobiso Wendlu Yakho Usebenzisa Izinto Zokungcola
IDiwali iwumkhosi wezibani nemibala emihle. Le Diwali, engeza ubukhazikhazi nokukhanya ekhaya lakho ngokusebenzisa imfucuza noma udoti! Ukugubha lo mkhosi ngesabelomali esiphansi yilokho okuheha abantu abaningi namuhla.
Izindlela ezi-5 zokususa ibala letiye ezingutsheni
Ukhathele ukukhuhla izingubo zakho ngomuthi wokuhlanza ukuze ususe ibala letiye. Nazi ezinye izindlela zokususa amabala wetiye ezingutsheni, kalula.
Izindlela Ezi-7 Ezilula Nezilula Zokukhipha Amabala Winki Kuzingubo
Ukubona izingubo zakho ezinamabala ngoyinki kungenye yezinto ezibuhlungu. Akunandaba ukuthi uzama kanzima kangakanani, amabala ngeke ahambe kalula. Ngakho-ke, silapha ngezinye izindlela ezilula ongasusa ngazo ibala likayinki ezingutsheni zakho.
Amathiphu Wokutshala Imali Ngokushesha
Nawa amanye amathiphu wokuthi utshale imali ngokushesha. Gcina isiqu sesitshalo semali ebhodleleni lamanzi bese uhlobisa ngaphakathi noma ngaphandle.
Amathiphu aphezulu ayi-5 wokuqeda izibankwa ekhaya
Susa izibankwa ekhaya ngalezi zeluleko ezilula. Izibankwa ekhaya zingacasula, ngakho-ke zama le mibono ukuze uziqede.
Izindlela Ezi-12 Ezisebenzayo Zasekhaya Zokuqeda Iziphazamisi Zokulala
Izimbungulu zombhede zivame kakhulu kepha abantu abaningi bayethuka futhi abazi ukuthi bangazisebenzisa kanjani izixazululo eziyisisekelo zekhaya zezimbungulu. Amakhambi afana ne-baking soda, uviniga, amaqabunga e-lavender, i-thyme njll angasiza.
Ungayigcina Kanjani Imali Ngokuya Nge-Vastu
Uma ufuna ukwandisa umnotho endlini yakho, kunezindawo ezithile zokugcina imali endlini yakho. Ngakho-ke funda ukuze wazi ukuthi yiziphi izindawo ezifanele zokugcina imali ngokuya nge-vastu.
Izindlela eziphumelelayo zokususa amabala odayi wezinwele kumathawula
Ungawasusa kanjani amabala wedayi wezinwele kumathawula? Kungaba umsebenzi owesabekayo. Bheka amanye amathiphu okususa amabala odayi bezinwele kumathawula.
Izixazululo Zasekhaya Zokuqeda Amajuba
Lokhu kuyingozi ngempela! Nakhu ukuthi ungaqeda kanjani amajuba ngokwemvelo kusuka kuvulandi wakho nasophahleni lwakho.
Izixazululo Zasekhaya Ezinhle Kakhulu Zokuqeda Izinyosi Ezinoju
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungaziqeda kanjani izinyosi zezinyosi ekhaya, zikutshele kahle amakhambi asekhaya wokuziqeda.
Izindlela eziyi-8 zokususa amabala we-turmeric ezingutsheni
Yize kunzima ukususa amabala we-turmeric ezingutsheni, kunezindlela ezahlukahlukene, ezisetshenziselwa ukwenza lokhu. Imvamisa kusetshenziswa into yokuhlanza noma ilamula. Apa
Izindlela Ezi-10 Ezilula Zokuhlanza Isitsha Esishile
Enye yezinto okunzima ukususa ukusha komkhumbi. Nazi ezinye izindlela zokuhlanza umkhumbi oshile.
Ungayilungisa Kanjani Ama-DIY Ekhaya Lakho ngeDiwali
Funda ukwazi ukuthi ungalungisa kanjani ama-diyas ekhaya le Diwali. Lezi izindlela ezilula zokulungiselela ama-diyas ekhaya.
Amathiphu Okukhulisa I-Curry Leaf Plant
Amaqabunga e-Curry ayingxenye engenakugwemeka yokupheka kwamaNdiya. Izitshalo zamaqabunga e-Curry zikhula ngokushesha ama-shrub aqandayo akhula kahle ngaphakathi
Izindlela Zokususa Amabala Esimbi Ezingutsheni
Ukususa amabala ensimbi ezingutsheni, nanka amathiphu ambalwa wakho.
Imibono Yokuhlobisa Umkhosi WeGanesh Chaturthi Ekhaya
Funda ukwazi imibono elula yomhlobiso womkhosi we-ganesha. Bheka izindlela zokuhlobisa izithombe ze-ganesh ze-zathurti.
Amathiphu ama-7 we-Vastu Wokuletha Amandla Avumelekile Ekhaya Lakho
Ubuwazi ukuthi ngokugcina izinto ezithile ekhaya lakho, ungathola okuhle? Funda ukwazi amathiphu ayisikhombisa we-vastu wokuletha amandla omuhle ekhaya lakho.
Izindlela Zokuhlobisa uKrishna NgeJanmashtami
Umkhosi wamaHindu obulindelwe kakhulu, uJanmashtami usondele. Sekuyisikhathi sokuhlobisa igumbi lakho le-pooja nesithombe seBal Gopal. Hlobisa isithombe seKrishna nge ....
imibono ye-ganpati bappa yokuhlobisa ekhaya
indlela yokuqondisa izinwele ngokwemvelo ekhaya ngamakhambi emvelo
ungenza kanjani amashiya akho abe mkhulu
Izinsuku ezinhle ze-hindu ngomashi 2018
indlela yokwenza isikebhe sikaKhisimusi igxathu negxathu